Tafio-drivotra any Atlantika: antony sy fiovaovan'ny toetr'andro | Meteorolojia tambajotra
Portillo Alemanina | 12/01/2022 10:00 | Fisehoan-javatra amin'ny toetr'andro
Noho ny fiovaovan'ny toetr'andro sy ny fiakaran'ny maripana antonony maneran-tany dia misy fiovana samihafa eo amin'ny lamin'ny atmosfera sy ny ranomasina. Amin'ity tranga ity, ny Oseana Atlantika dia mampitandrina ny fiovana mitranga noho ny fiovan'ny toetr'andro. ny tafio-drivotra any Atlantika mitombo izy ireo ary miaraka amin'izy ireo ny fiforonan'ny rivo-doza sy ny rivotra mahery vaika.
Ato amin'ity lahatsoratra ity dia holazainay aminao hoe iza amin'ireo no mahatonga ny fitomboan'ny oram-baratra any amin'ny Atlantika ary inona no vokatry ny fiovan'ny toetr'andro any amin'ny Oseana Atlantika miha-tropikaly.
1 Tafio-drivotra any Atlantika
2 Nitombo ny oram-baratra tany Atlantika
3 Anomalia amin'ny vanim-potoana 2020
4 Fanadihadiana momba ny fiovan'ny toetr'andro
Mampitandrina ny Oseana Atlantika. Ity dia famintinana ny fiovan'ny fihetsehan'ny atmosfera hita tato anatin'ny taona vitsivitsy izay misy fiantraikany amin'ny avaratr'i Macaronesia, faritra ahitana ny Azores, ny Nosy Canary, Madeira ary ny nosy efitra, ary ny atsimoandrefan'ny Saikinosy Iberiana. Ny zava-drehetra dia manondro ny fiovan'ny toetr'andro ho tropikaly.
Hatramin'ny nahatongavan'ny rivo-doza tropikaly Delta tamin'ny 2005 tany amin'ny Nosy Canary, ny isan'ny rivodoza tropikaly mandalo amin'ireo faritra ireo. nitombo be tao anatin’ny 15 taona farany. Ireo rivo-doza ireo dia faritra misy toetr'andro ambany tsindry mafy ary tsy mampiseho ny fitondran-tena mahazatra amin'ny tafio-drivotra midadasika na rivodoza extratropika izay mahazatra antsika amin'ity faritry ny planeta ity. Mitovitovy kokoa amin'ny rivodoza tropikaly mahazatra izay miantraika any Karaiba any ampitan'ny Atlantika kosa izy ireo.
Raha ny marina, ireo trangan-javatra ireo dia mitovitovy amin'ny rivodoza tropikaly amin'ny rafitra sy ny natiora. Hany ka ny US National Hurricane Center dia nampitombo ny fikarohana sy ny fanaraha-maso ny toeram-ponenan-dranontsika tato anatin'ny taona vitsivitsy, ary nantsoiny hoe vondrona iray tsy misy dikany amin'ireo tranga ireo.
Nitombo ny oram-baratra tany Atlantika
Nitombo ny anomaliana voalaza etsy ambony tato anatin’ny dimy taona. Manana ohatra miavaka izahay:
Rivo-doza Alex (2016) Tany atsimon’ny Azores no nitrangan’izany, tokony ho 1.000 140 km miala ny Nosy Canary. Miaraka amin'ny rivotra maharitra mahatratra 1938 kilometatra isan'ora, dia tonga amin'ny rivo-doza izy ary mandeha amin'ny fomba tsy mahazatra manerana ny Atlantika Avaratra. Io no rivo-doza voalohany niforona tamin'ny Janoary nanomboka tamin'ny XNUMX.
Rivo-doza Ophelia (2017), ny rivo-doza sokajy 3 voalohany amin'ny maridrefy Saffir-Simpson any atsinanan'ny Atlantika hatramin'ny nanombohan'ny firaketana (1851). Nahatratra 170 kilometatra isan'ora mahery i Ophelia.
Rivo-doza Leslie (2018), ilay rivo-doza voalohany tonga teo akaikin’ny morontsiraka saikinosy (100 km). Nandona an'i Portugal izy io tamin'ny marainan'ny andro niaraka tamin'ny rivotra mahatratra 190 kilometatra isan'ora.
Rivo-doza Pablo (2019), ny rivo-doza akaiky indrindra niforona tany Eoropa.
Tahaka ny fiakaran'ny ranomasina farany teo, nandrahona ny Nosy Canary ny Rivo-doza tropikaly Theta, 300 kilometatra monja miala ireo nosy ireo.
Ankoatra ireo tranga ireo dia misy lisitra lavabe miaraka amin'izy ireo satria tena tsy fahita firy ary misy fiantraikany amin'ireo faritra voalaza etsy ambony ireo. Amin'izany fomba izany dia nitombo ho indray mandeha isan-taona ny fatran'ny tao anatin'ny dimy taona farany, ary mihoatra ny indray mandeha aza tao anatin'ny roa taona. Talohan'ny taona 2005 dia iray isaky ny telo na efa-taona ny matetika, tsy misy loza mitatao amin'ny fiantraikany.
Anomalia amin'ny vanim-potoana 2020
Ity tsy fahita firy ity dia mifanaraka amin'ny zava-mitranga mandritra ny vanim-potoanan'ny rivo-doza ny volana jona ka hatramin'ny Novambra amin'ity taona ity. Ny vinavina dia efa manondro vanim-potoana tena mavitrika izay miafara amin'ny rivodoza 30, firaketana marina. Midika izany fa mampiasa ny abidy grika izy ireo, ankoatra ny vanim-potoana ara-tantara tamin'ny 2005.
Amin'ny lafiny iray, ny vanim-potoana dia miavaka amin'ny rivo-doza mahery vaika amin'ny sokajy 3 na ambony. Raha ny marina, dia nanatevin-daharana ny fizaran-taona efatra voalohany hatramin'ny nanombohan'ny firaketana (1851) izany farafahakeliny rivo-doza sokajy 5 iray no niforona tao anatin'ny fizaran-taona dimy nisesy. Ity farany dia tena mifanaraka amin'ny vinavinan'ny fiovaovan'ny toetr'andro, ny rivo-doza mahery vaika dia matanjaka kokoa sy matetika kokoa.
Fanadihadiana momba ny fiovan'ny toetr'andro
Tsy maintsy tsaroana fa misy ifandraisany amin’ny vokatry ny fiovaovan’ny toetr’andro ny fitomboan’ny oram-baratra any amin’ny Atlantika sy ny tropikaly amin’io faritra io. Eny ny valiny, fa mila fikarohana bebe kokoa.. Amin'ny lafiny iray, tsy maintsy mahafantatra ny fifandraisana amin'ireo zava-nitranga voamarika isika, ary any Espaina dia mbola tsy manana fahaiza-manao ara-teknika amin'ny fanatanterahana io karazana fanadihadiana momba ny asa io izay atao any amin'ny firenena hafa. Ny azontsika apetraka dia fifandraisana mifototra amin'ny fandinihana ny vinavinan'ny toetr'andro amin'ny ho avy izay mihevitra fa mitranga matetika kokoa ao amin'ny dobontsika ireo tranga ireo.
Eo no ahafahantsika manorina fifandraisana, na dia ilaina aza ny fikarohana bebe kokoa hamantarana sy hanatsara bebe kokoa ny mombamomba ireo fisehoan-javatra ho avy ireo mba hanatsarana ny drafitra fampifanarahana amin'ny fiovan'ny toetr'andro. Na dia marina aza fa azo atao izany tsy mahatratra ny haavony avo kokoa toy ny sokajy 3 na ambonyNy rivo-doza sy ny rivo-doza tropikaly kely dia mampanahy manokana ihany koa noho ny fiantraikany lehibe amin'ny morontsirak'i Etazonia ary tsy maintsy ampiana fa any Espaina dia tsy niomana tanteraka tamin'izany izahay.
Ny toetra iray hafa tokony hodinihina dia ny fisian'izy ireo tsy azo antoka kokoa amin'ny vinavinany. Tsy toy ny any amin'ny tany mafana, izay misy fiantraikany amin'ny lafin-javatra azo vinaniana kokoa ny lalan'ny rivodoza, rehefa manomboka manatona ny faritra midadasika misy antsika ireo rivodoza ireo, dia manomboka voataonan'ny anton-javatra tsy dia ampoizina loatra izy ireo, ka mitombo ny tsy fahatokisana. Ny lafiny manan-danja iray hafa dia ny ny mety hisian'ny fiantraikany lehibe indrindra rehefa manomboka mivoatra ho tafio-drivotra midadasika izy ireo, Tetezamita fantatra amin'ny anarana hoe transition extratropical, izay mety hahatonga azy ireo hanitatra ny faritra misy azy.
Farany, zava-dehibe ihany koa ny fiheverana ny mety ho tsy fahatokisana amin'ny fironana raiki-tapisaka amin'ilay tranga resahina. Na dia heverina hatrany amin'ny firaketana ara-tantara nanomboka tamin'ny 1851 aza ireo fiovana rehetra ireo, raha ny marina dia nanomboka tamin'ny 1966 ireo firaketana ireo. azo heverina ho mafy orina sy azo ampitahaina amin'ny vanim-potoana misy antsika ankehitriny, satria izay no fiandohan'ny zavatra azo atao. Jereo amin'ny zanabolana izy ireo. Noho izany dia tokony hotadidina foana izany rehefa mamakafaka ny fironana hita amin'ny rivodoza tropikaly sy ny rivo-doza.
Manantena aho fa amin'ity fampahalalana ity dia afaka mianatra bebe kokoa momba ny anton'ny fitomboan'ny tafio-drivotra any Atlantika ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Meteorolojia amin'ny tambajotra » Fisehoan-javatra amin'ny toetr'andro » Tafio-drivotra any Atlantika
Volkano lehibe indrindra eran-tany